इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - ख्रीष्टको चर्च ... यी मानिसहरू को हुन्?
ख्रीष्टका चर्चहरू ... यी मानिसहरू को हुन्?
जो आर बर्नाट द्वारा
तपाईंले सम्भवतः ख्रीष्टको मण्डलीहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ। अनि सम्भवतपाईँले सोध्नुभयो, "यी व्यक्तिहरू के हुन्? के - यदि केहि छ भने - संसारका सैकड़ों अन्य चर्चहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्छ?
तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ:
"तिनीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो छ?"
"तिनीहरूले कति सदस्यहरू छन्?"
"तिनीहरूको सन्देश के हो?"
"तिनीहरू कसरी व्यवस्थित हुन्छन्?"
"तिनीहरू कसरी उपासना गर्छन्?"
"तिनीहरूले बाइबलको बारेमा के विश्वास गर्छन्?
विश्वव्यापी त्यहाँ केही 20,000 मण्डलीहरू ख्रीष्टका चर्चहरूको 21 /2सँग3लाख व्यक्तिगत सदस्य छन्। त्यहाँ साना समूहहरू छन् जुन केही सदस्यहरू छन् - र ठूला ठूला ठूला सदस्यहरू छन्।
ख्रीष्टको चर्चहरूमा संख्यात्मक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो एकाग्रता दक्षिणी संयुक्त राज्यमा छ, जहाँ उदाहरणका लागि, त्यहाँ NNNXX सदस्यहरू छन् Nashville, टेनेसीका केहि 40,000 मण्डलीहरूमा। अथवा, डलास, टेक्सासमा, जहाँ 135 मण्डलीहरूमा लगभग 36,000 सदस्यहरू छन्। टेनेसी, टेक्सास, ओकलाहोमा, अलबामा, केन्टकी र अन्य जस्ता जस्ता अवस्थाहरूमा - व्यावहारिक रूपले हरेक शहरमा क्रिश्चियन चर्च हो, कुन कुरा ठूलो वा सानो कुरा हो।
जबकि मण्डली र सदस्यहरूको संख्या अन्य ठाउँहरूमा धेरै धेरै छैन, संयुक्त राज्य अमेरिका र 109 अन्य देशहरूमा हरेक राज्यमा ख्रीष्टको चर्चहरू छन्।
पुनर्स्थापना आत्माका मानिसहरू
ख्रीष्टका चर्चहरूका सदस्यहरू पुनरुत्थान आत्माका मानिसहरू हुन् - हाम्रो समयमा नयाँ नियमको चर्च पुनर्स्थापना गर्न चाहान्छ।
डा हन्स कुंग, एक ज्ञात युरोपियन धर्मविज्ञान, पुस्तक को केहि साल पहिले चर्च चर्च। डा। कुंगले यो तथ्यलाई जोड दिए कि स्थापित चर्चले आफ्नो बाटो गुमाएको छ; परम्पराको साथ बोझिएको छ; ख्रीष्टलाई यो योजना हुनुपर्छ जुन हुन असफल भयो।
डाङ कुङ्गको अनुसार एकमात्र उत्तर, चर्चहरूलाई पछि लाग्न के लागी चर्च हेर्न शुरु भएको छ, र त्यसपछि बीसौं शताब्दीमा मूल चर्चको सार को पुन: प्राप्त गर्न। यो ख्रीष्टको कस्ता चर्चहरू खोजिरहेका छन्।
18 सदीको अन्तिम भागमा, विश्वको विभिन्न भागहरूमा विभिन्न भिन्नताहरूको पुरुषहरू, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्न सोध्न थाल्नुभयो:
-अहिले पहिलो शताब्दीको चर्चको सादगीता र शुद्धतालाई मानसिकताभन्दा बाहिर जाने छैन?
- किन बाइबल एक्लै लिन सक्नुहुन्न र एक पटक फेरि "प्रेषितहरूमा शिक्षा" निरन्तरता दिइरहेछ ... "(प्रेरित 2: 42)?
- किन एउटै बीउ रोप्नु हुँदैन (परमेश्वरको वचन, लूका 8: 11), कि पहिलो शताब्दीका ख्रीष्टियनहरू रोप्थे र केवल ईसाई हुन्छन्, जस्तै तिनीहरू थिए?
तिनीहरू सबैको साथ मानेरवादवाद त्यागेका थिए, मानव सृष्टिहरु त्याग्न र बाइबल मात्र पछ्याउन चाहन्थे।
तिनीहरूले सिकाउँथे कि धर्मशास्त्रको कुरा स्पष्ट नभएसम्म विश्वासको कार्यको रूपमा केही पनि आवश्यक पर्दैन।
तिनीहरूले जोड दिएका छन् कि बाइबलमा फर्किनुको अर्थ अर्को विनाशको स्थापना होइन, तर मूल चर्चमा फर्किनु हुँदैन।
यस दृष्टिकोणको बारेमा ख्रीष्टको मण्डलीका सदस्यहरू उत्साहित हुन्छन्। बाइबलको साथ हाम्रो मात्र मार्गदर्शनको रूपमा हामीले खोज्न चाहने मूल चर्च कस्तो थियो र यसलाई पुनर्स्थापित गर्न खोज्छौं।
हामी यो अहंकारको रूपमा देख्न सक्दैनौं, तर धेरै विपरीत। हामी बचत गर्छौं कि हामीसँग मानव संगठनको लागि मानिसहरूको ईमानदारीको लागि सोध्नु सही छैन - तर केवल पुरुषहरूलाई परमेश्वरको निलो पछ्याउनको लागि कल गर्ने अधिकार हो।
एक नामाकरण होइन
यस कारणको लागि, हामी मानव निर्मित सृजनमा रुचि छैनौं, तर केवल नयाँ नियमको ढाँचामा। हामी एक भेदभावको रूपमा आफैं कल्पना गर्नुहुन्न - कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट अथवा यहूदीको रूपमा - तर केवल चर्चको सदस्य जसको रूपमा येशू स्थापना भयो र जसको लागि उहाँ मर्नुभयो।
र त्यो, संयोगवश, किनकि हामी उनको नाम लुकाउँछौ। शब्द "ख्रीष्टको चर्च" को एक मान्य पद को रूप मा प्रयोग नहीं गरिन्छ, बल्कि एक वर्णनात्मक शब्द को रूप मा बताइन्छ कि चर्च ख्रीष्ट संग सम्बन्धित छ।
हामी आफ्नै व्यक्तिगत कमजोरीहरू र कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्छौं - र यो सबै चर्च हो कि भगवानको चर्चको लागि पर्याप्त ध्यान दिनुहोस र पूर्ण योजना पालन गर्न चाहने सबै कारण हो।
एकता बाइबल आधारित
किनकि परमेश्वरले ख्रीष्टमा "सबै प्राधिकरण" नियुक्त गर्नुभएको छ (मत्ती 28: 18), र जब उहाँले आजको प्रवक्ताको रूपमा सेवा गर्नुहुन्छ (हिब्रू 1: 1,2), यो हाम्रो विश्वास हो कि केवल ख्रीष्ट भनेको चर्च भनेको के हो भन्ने अधिकार हो र के हामीले सिकाउनुपर्छ।
अनि केवल नयाँ नियमले आफ्ना चेलाहरूलाई ख्रीष्टको निर्देशनहरू सेट गरिसकेपछि मात्र यो सबै धार्मिक शिक्षा र अभ्यासको आधारको रूपमा सेवा गर्नुपर्छ। यो ख्रीष्टको चर्चका सदस्यहरूसँग आधारभूत छ। हामी विश्वास गर्छौं कि नयाँ नियमलाई परिमार्जन नगरी पुरुष र स्त्रीहरूको नेतृत्व गर्ने एक मात्र तरिका भनेको मसीहीहरू हुन।
हामी विश्वास गर्छौं धार्मिक विभाजन खराब छ। येशूले एकताको लागि प्रार्थना गर्नुभयो (जॉन 17)। अनि पछि, प्रेरित पावलले ती ख्रीष्टियनहरूलाई एकताबद्ध गर्न विभाजित गरेका थिए (1 कोरिन्थी 1)।
हामी एकता प्राप्त गर्न एकमात्र तरिका बाइबिलको फिर्तीमा विश्वास गर्छौं। समझौता एकता ल्याउन सक्दैन। र निश्चित रूप देखि कुनै पनि व्यक्ति, न त व्यक्तिहरु को समुह को अधिकार को एक सेट तैयार गर्ने अधिकार छ जसको द्वारा सबै को पालन गर्नु पर्छ। तर यो पूर्णतया भन्नको लागी उचित छ, "आउनुहोस् बाइबल पालन गरौं।" यो निष्पक्ष हो। यो सुरक्षित छ। यो सही छ।
त्यसोभए ख्रीष्टको चर्चहरूले बाइबिलमा आधारित एकताबद्ध एकताको लागि आग्रह गर्दछ। हामी विश्वास गर्छौं कि कुनै नयाँ नियमको आज्ञा पालन गर्न इन्कार गर्न वा नयाँ नियमद्वारा सँधै कुनै पनि अभ्यास पालन गर्न को लागी कुनै नयाँ सृष्टि भन्दा अरूलाई सृष्टि गर्न को लागी, ईश्वरका शिक्षाहरूबाट थप्न वा लिनु हो। र दुवै थप र उपन्यासहरू बाइबलमा निन्दा गरिन्छ (गलातीस 1: 6-9; प्रकाश 22: 18,19)।
यो कारण हो कि नयाँ नियम विश्वास र एकमात्र शासन हो जुन हाम्रो ख्रीष्टको चर्चमा छ।
प्रत्येक मण्डली आत्मनिर्भर हुन्छ
ख्रीष्टको चर्चहरू आधुनिक-आधुनिक संगठनात्मक नौकरशाहीको अनुगमनमा छन्। त्यहाँ कुनै प्रशासनिक बोर्डहरू छैनन् - न त जिल्ला, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र नत्र अन्तर्राष्ट्रिय - कुनै पार्थिव मुख्यालयहरू र कुनै डिजाइन गरिएको संगठन होइन।
प्रत्येक मण्डली स्वायत्त (आत्मनिर्धारित) हो र हरेक मण्डलीमा स्वतन्त्र छ। एक मात्र टाई जसले धेरै मण्डलीहरूलाई सँगसँगै बाँध्छ ख्रीष्ट र बाइबिलको समान बानी हो।
त्यहाँ कुनै अधिवेशनहरू छैनन्, वार्षिक सभाहरू, र आधिकारिक प्रकाशनहरू। मण्डलीका छोराछोरीहरूलाई घरको समर्थन, वृद्ध, मिशन कार्यका लागि घरहरू समर्थन गर्न सहयोग गर्दछ। तथापि, हरेक मण्डलीको पक्षमा सहभागीता र कुनै पनि व्यक्ति न त समूहको समस्याहरू नीतिहरू वा अन्य मण्डलीहरूको लागि निर्णय गर्दछ।
प्रत्येक मण्डलीले स्थानीय सदस्यहरूलाई सँगी बहुमुखी सदरमुकामका सदस्यहरु द्वारा चयन गरीएको छ। यी पुरुषहरू हुन् जो 1 तिमोथी3र टाइटस 1 मा दिइएको यस कार्यालयको लागि विशिष्ट योग्यताहरू पूरा गर्छन्।
प्रत्येक मण्डलीमा पनि देवताहरू छन्। यो 1 तिमोथी3को बाइबिल योग्यताहरू पूरा गर्नुपर्छ। I
ख्रीष्टका चर्चहरूमा पूजा गर्ने पाँच वस्तुहरूमा केन्द्रित, पहिलो शताब्दीको चर्चमा। हामी विश्वास गर्छौं कि ढाँचा महत्त्वपूर्ण छ। येशूले भन्नुभयो, "परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँको उपासना गर्नेहरूलाई आत्मा र सत्यमा पूजा गर्नु पर्छ" (यूहन्ना 4: 24)। यस कथनबाट हामीले तीन चीजहरू सिक्यौं:
1) हाम्रो उपासनालाई सही वस्तुमा निर्देशित हुनुपर्छ ... ईश्वर;
2) यो सही मनोभावद्वारा प्रेरित हुनुपर्छ;
3) यो सत्य अनुसार हुनुपर्छ।
सत्य अनुसार परमेश्वरको उपासना गर्न उहाँको वचन अनुसार उहाँको उपासना गर्नु हो किनकि उहाँको वचन सत्य हो (यूहन्ना 17: 17)। यसैले, हामीले आफ्नो वचनमा पाइने कुनै चीजहरू बहिष्कार गर्नुपर्दैन, र हामीले आफ्नो वचनमा फेला परेका कुनै वस्तुहरू समावेश गर्नुपर्दैन।
धर्मको मामिलामा हामी विश्वासले हिंड्छौं (2 कोरिन्थी 5: 7)। विश्वासले गर्दा परमेश्वरको वचन सुनेर आउँछ (रोमी 10: 17), बाइबिल द्वारा अधिकृत कुनै पनि विश्वासले गर्न सक्दैन ... र जो विश्वासको हो भने पाप होइन (रोमी 14: 23)।
प्रथम शताब्दीको चर्चले देखाएको पाँचवटा वस्तुहरू पूजा, प्रार्थना, प्रचार, देवी र प्रभुको भोज खाएको थियो।
यदि तपाईं ख्रीष्टका चर्चहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सजग हुनुहुन्छ कि यी दुई वस्तुहरूमा हाम्रो अभ्यास धेरै धार्मिक समूहहरूको फरक छ। त्यसैले मलाई यी दुईमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिनुहोस्, र हामी के गर्छौं हाम्रो कारणहरू बताउँदछौं।
ख्रीष्टको चर्चहरूको बारेमा मानिसहरु प्रायः प्रायः एक कुरा हो कि हामी संगीतको मेकानिकल उपकरणको प्रयोग बिना गाईन्छौं - एक क्याप्ला गायन हाम्रो उपासनामा प्रयोग गरिएको एक मात्र संगीत हो।
केवल भनिएको छ, यहाँ कारण हो: हामी नयाँ नियमको निर्देशन अनुसार पूजा गर्न चाहन्छौं। नयाँ नियमले वाद्य संगीत छोड्छ, त्यसकारण, हामी यसलाई विश्वास र सुरक्षित मान्दछौं, यसलाई छोडेर पनि छोड्नुहोस्। यदि हामीले मेनेनिकल साधन प्रयोग गर्यौँ भने हामीले यो नयाँ नियमको अधिकार बिना गर्नु पर्छ।
त्यहाँ पूजाहारीको विषयमा नयाँ नियममा केवल 8 पदहरू छन्। यहाँ तिनीहरू छन्:
"अनि जब तिनीहरू एक भजन गाईदिए, तिनीहरू जैतून माउन्टतिर गए" (मत्ती 26: 30)।
"आधी रातको बारेमा पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै थिए र भगवानलाई भजन गाँउदै ..." (प्रेरित 16: 25)।
"यसैले म तिमीहरूलाई अन्यजातिहरूका बीचमा प्रशंसा गर्नेछु, र तपाईंको नाम गाऊँ" (रोमी 15: 9)।
"म आत्माको साथ गाऊँगा र म दिमाग संग गाऊँगा" (एक्सएनएक्सएक्स कोरिन्थी 1: 14)।
"आत्माले भरिएको, भजनसंग्रहमा एक अर्कालाई भजन, भजन र आध्यात्मिक गीतहरू गाईरहेका, गायन र सम्पूर्ण हृदयले प्रभुलाई भित्री बनाउन" (एफिसीएक्सएनएमएक्सएक्स: 5)।
"ख्रीष्टको वचन धनीले तिमीहरूमा रहोस्, तिमी सबै ज्ञानमा एकअर्कालाई सिकाउँछौ र सुसमाचार गरौ।" (कलस्सी 3: 16)। (कलस्सी XNUMX: XNUMX)।
"म तपाईंका भाइहरूलाई तपाईंको नाउँ घोषणा गर्नेछु, मण्डलीको बीचमा मैले तिनीहरूलाई दयालु गीत गाऊँ" (हिब्रू 2: 12)।
"के तपाईंमध्ये कुनै पनि पीडा छ? उसलाई प्रार्थना गरौं। कुनै पनि उत्साहित छ? उहाँलाई प्रशंसा गरौं" (जेम्स 5: 13)।
सङ्गीतको मेकानिकल उपकरण यी पासपोर्टहरूमा समेटिएको अनुपस्थित छ।
ऐतिहासिक रूपमा, चर्चको उपासनामा साधन संगीतको पहिलो उपस्थिति छैटौं शताब्दी ईस्वी सम्मको थिएन, र आठौं शताब्दी पछि सम्म यो सामान्य अभ्यास छैन।
नयाँ नियममा यसको अनुपस्थितिको कारण यो वाद्य संगीतले यस्ता धार्मिक नेताहरू जॉन क्याल्भेन, जॉन वेस्ले र चार्ल्स स्पर्जोनले कडा विरोध गरे।
प्रभुको भोजको साप्ताहिक अवलोकन
अर्को ठाउँ जहाँ तपाईंले ख्रीष्ट र अन्य धार्मिक समूहहरूको बीचमा फरक फरक पार्नुभएको थियो प्रभुको भनाइमा छ। यो स्मारक को भोजन उनको धोखा को रात मा यीशु द्वारा उद्घाटन गरिएको थियो (मत्ती 26: 26-28)। यो भगवानको मृत्युको स्मृतिमा ईसाइयों द्वारा देखी जान्छ (1 कोरिन्थी 11: 24,25)। प्रतीक - अशुद्ध रोटी र दाखको फल - यीशुको शरीर र रगतको प्रतीक (1 कोरिन्थी 10: 16)।
ख्रीष्टका चर्चहरू धेरै देखि फरक छन् जुन हामी हरेक हप्ताको पहिलो दिन प्रभुको भोज हेर्नुहोस्। फेरि, हाम्रो कारण केन्द्र नयाँ नियमको शिक्षा पालन गर्न हाम्रो दृढतामा। यो भन्नुहुन्छ, पहिलो शताब्दीका चर्चको अभ्यास वर्णन गर्दै, "र हप्ताको पहिलो दिनमा।" चेलाहरू रोटी ब्रेक गर्न एकसाथ आए। "(प्रेरित 20: 7)।
कसैलाई यो कुराले मन परायो कि पाठ हरेक हप्ताको पहिलो दिन निर्दिष्ट गर्दैन। यो सत्य हो - विश्रामको पालन गर्न आज्ञाको रूपमा प्रत्येक सब्बथलाई निर्दिष्ट गर्नुभएन। आज्ञा मात्र थियो, "विश्राम दिनको लागि यो पवित्र राख्न" सम्झनुहोस् "(प्रस्थान 20: 8)। यहूदीहरूले हरेक शनिबारको मतलब बुझ्थे। यो हामीलाई जस्तो देखिन्छ कि एउटै तर्क "हप्ताको पहिलो दिन" को अर्थ हरेक हप्ताको पहिलो दिन हो।
फेरि, हामी न्यानर र इसेबियस जस्ता यस्तो सम्मानित इतिहासकारहरुबाट जान्दछन् जुन ती प्रारम्भिक शताब्दीका मसीहीहरूले हरेक आइतबार प्रभुको भोज लिइन्।
सायद तपाईं सोचिरहनुभएको छ "कसरी कसरी ख्रीष्टको मण्डलीको सदस्य बन्न सक्छ?" सदस्यताको सर्तहरू के हो?
ख्रीष्टको चर्चहरूले केही सूत्रको सन्दर्भमा सदस्यताको कुरा गर्दैनन् जुन चर्चमा अनुमोदित स्वीकृतिको लागी पछ्याउनु पर्छ। नयाँ नियमले केही दिनहरूलाई केही दिन दिइन्छ जुन त्यस दिन मानिसहरूलाई ख्रीष्टियन बन्न पुग्यो। जब एक व्यक्ति एक मसीही बन्यो जब उनी स्वचालित रूपमा चर्चको सदस्य थिए।
आज ख्रीष्टको मण्डलीहरूको पनि सत्य हो। त्यहाँ कुनै नियम वा समारोहको कुनै अलग सेट छैन जुन मण्डलीमा लागु गर्न पछ्याउन पर्छ। जब एक एक युवती बन्छ तब, एकै समयमा, चर्चको सदस्य बन्छ। चर्च सदस्यताको लागि योग्यता गर्न थप कदमहरू आवश्यक पर्दैन।
चर्चको अस्तित्वको पहिलो दिनमा पश्चात्ताप गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरू बचाइएका थिए (प्रेरित 2: 38)। र त्यस दिनबाट बचाइएका सम्पूर्ण मानिसहरू चर्चमा थपिएका थिए (प्रेरित 2: 47)। यस पदको अनुसार (प्रेरित 2: 47) यो भगवान थियो जो थप्नु भयो। यसैले, यो ढाँचा पछ्याउन खोज्ने क्रममा, हामी मानिसहरू मानिसहरूलाई चर्चमा मतदान गर्दैनौं र नचाहिँ अध्ययनको आवश्यक श्रृंखलामार्फत बलियो बनाउँछौं। हामी कुनै पनि मुक्तिदातालाई आज्ञाकारिता प्रस्तुत भन्दा बाहिर माग गर्न कुनै अधिकार छैन।
नयाँ नियममा सिकाइएको क्षमा को शर्तहरू हुन्:
1) कसैले सुसमाचार सुन्नैपर्छ, "विश्वासले परमेश्वरको वचन सुनेर आउँछ" (रोमी 10: 17)।
2) कसैले "विश्वास बिना यो ईश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन असम्भव पर्छ" (हिब्रू 11: 6)।
3) प्रत्येकले अतीतको पापको पश्चात पश्चात्ताप गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरले "सबै पुरुषहरूलाई आज्ञा दिन्छ, हरेक जहाँ कहाँ पश्चाताप गर्न" (प्रेरित 17: 30)।
4) कसैले येशूलाई भगवानको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ, किनभने उहाँले भन्नुभयो, "उहाँले मन्नुअघि मलाई स्वीकार गर्दछु, म स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पितालाई पनि स्वीकार गर्दछु" (मत्ती 10: 32)।
5) र एक पापको छुटकाराको लागि बप्तिस्मा हुनुपर्छ, पत्रुसले भने, "घृणा गर्नुहोस्, र तिमीहरूका पाप सबैलाई ख्रीष्टको नाममा तपाईंको पापको निम्ति बप्तिस्मा लिनुहोस् ..." (प्रेरित 2: 38) ।
बप्तिस्मा मा जोड
ख्रीष्टको चर्चहरू बप्तिस्माको आवश्यकतामा धेरै दबाब राख्नको लागि प्रतिष्ठा छ। तथापि, हामी "चर्च अध्याय," तर ख्रीष्टको आज्ञाको रूपमा बप्तिस्मालाई जोड दिदैनौं। नयाँ नियमले बप्तिस्मालाई एक कार्यको रूपमा मुक्तिको लागि आवश्यक छ (मार्क 16: 16; प्रेरित 2: 38; प्रेरित 22: 16)।
हामी शिशु बप्तिस्माको अभ्यास गर्दैनौं किनभने नयाँ नियम बप्तिस्मा केवल पापीहरूका निम्ति मात्र हो जसले विश्वास र पापीतामा भगवानलाई फर्काउँछ। पश्चात्ताप गर्न एक शिशुको कुनै पाप छैन, र विश्वासीको रूपमा योग्य हुन सक्दैन।
हामी ख्रीष्टको चर्चमा अभ्यास गर्ने बप्तिस्माको एक मात्र रूप विच्छेद हो। ग्रीक शब्द जसबाट बप्तिस्मा आउछ, "डुब्न, विसर्जन गर्न, विलय गर्न, डुब्न" को अर्थ हो। र धर्मशास्त्रले सधैं बप्तिस्माको रूपमा बप्तिस्मालाई संकेत गर्दछ (प्रेरित 8: 35-39; रोमन 6: 3,4; कलस्सी 2: 12)।
बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने नयाँ नियमले यसको लागि निम्नलिखित उद्देश्यहरू सेट गर्दछ:
1) यो राज्य प्रवेश गर्नु हो (जॉन 3: 5)।
2) यो ख्रीष्टको रगतलाई सम्पर्क गर्नु हो (रोमी 6: 3,4)।
3) यो ख्रीष्टमा पुग्छ (गलातीस 3: 27)।
4) यो मुक्तिको लागि हो (मार्क 16: 16; 1 पीटर 3: 21)।
5) यो पाप को छूट को लागि हो (प्रेरित 2: 38)।
6) यो पापहरू धोका गर्नु हो (प्रेरित 22: 16)।
7) यो चर्चमा जान्छ (1 कोरिन्थी 12: 13; एफिसी 1: 23)।
ख्रीष्टले सम्पूर्ण संसारको पापको लागि मर्नुभयो र आफ्नो बचत अनुग्रहमा साझेदारी गर्न निमन्त्रणा सबैको लागि खुला छ (प्रेरितहरु 10: 34,35; प्रकाश 22: 17), हामी विश्वास गर्दैनौं कि कुनै पनि मुक्ति वा निन्दाको लागि भविष्यवाणी गरिएको छैन। कसैलाई विश्वास गर्न र आज्ञाकारितामा ख्रीष्ट आउन छनौट हुनेछ र बचाउनेछ। अरूले उनको अनुरोध अस्वीकार गर्नेछन् र निन्दा गरे (मार्क 16: 16)। यो गुमाउनु हुँदैन किनभने तिनीहरू दोषीको लागि चिन्ह लगाइएको थियो, तर किनकि त्यो छनौट हो।
जहाँ तपाईं यस क्षणमा हुनुहुन्छ, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं ख्रीष्टद्वारा प्रस्तावित मुक्ति स्वीकार्ने निर्णय गर्नुहुन्छ - कि तपाई आफैले आज्ञाकारी विश्वासमा प्रस्ताव गर्नुहुनेछ र उहाँको चर्चको सदस्य बन्नुहुनेछ।